Chii chiri chiyero chakaenzana | Ehupfumi Zvemari
Chii chinonzi chiyero chakaenzana
Encarni Arcoya | 29/09/2021 11:43 | Yakagadziridzwa ku 30/09/2021 17:13 | General hupfumi
Kana isu tichitaura nezve Mutero uye Mutero Agency, zvirokwazvo bvudzi rako rinomira pamagumo. Uye ndezvekuti nguva zhinji tinotya kuti hatisi kuita zvinhu nemazvo uye tinozviwana tiine chiziviso kubva kuHaimari mavanoda mari kubva kwatiri ichiperekedzwa ne "sanction" yayo inoenderana. Naizvozvo, nhasi tiri kutaura nezvazvo kuenzana kwekuwedzera.
Asi chii chiero chakaenzana? Ndiani anoripa? Chinoshanda sei? Kana iwe zvakare uchida kuziva uyu "mutero" une hukama neVAT, isu tinokubatsira iwe kuti unzwisise zvizere.
1 Chii chinonzi chiyero chakaenzana
2 Ndiani anobatwa
3 Ndezvipi zvigadzirwa zvinosarudzika
4 Mashandiro anoita akaenzana sei
5 Zvakanakira nekukanganisa kweiyo yakafanana surcharge
6 Kuenzana mutero wekuwedzera (uye kuregererwa)
6.1 Pane kusunungurwa here?
Ngatitangei nekutsanangura kuti chii chakaenzana chibhadharo. Mune ino kesi, iwe unofanirwa kuyeuka kuti iwo mutero usina kunangana. Izvi zvinoreva kuteedzana kwezvisungo zvemahara, makambani, masangano nemakambani, angave ari masevhisi kana maindasitiri, pamwe nemakambani ehurumende.
Uye chii ichi chiyero chakaenzana chinoita? Zvakanaka izvo hutongi hwakakosha hunoshanda kuVAT. Mune mamwe mazwi, ndeye yakakosha VAT iyo chete vatengesi vanobhadhara nekuti izvo zvavanotengesa hazvizvishandure.
Semuenzaniso, fungidzira une chitoro chetii. Unotenga tii kubva kune vanotengesa vako kuitira kuti ugone kuitengesera vatengi, asi hauishandure, asi, neimwe nzira, unoshanda semurevereri pakati pemutengesi nemutengi. Huye, urwu rudzi rwechiitiko, pamusoro pekusungirwa kuVAT, zvakare ichave neyakaenzana chiyero.
Iye zvino zvawava kuziva zvishoma nezvatinoreva, uye kuti takakuudza zvishoma nezvekuti ndiani "anotambura" nazvo, ngaticherei mazviri.
Zvinoenderana nemirau yemutero agency, iyo yekufananidza yekuwedzera inokanganisa zvakananga iyo kutengesa kushambadzira, kune vanhu kana makambani ehurumende, kunhengo dzemunharaunda, nharaunda yezvivakwa, nhaka dzinodzokororwa ...
Panyaya yevatengesi, havazi vese vanofanirwa kubhadhara "mutero" uyu, asi zvinongomanikidza chete kune avo vanobhadhara zvinopfuura makumi maviri kubva muzana zvekutengesa kwavo nekutengesa vatengi vehunyanzvi nevamabhizimusi.
Pane kupokana, zviitiko zvemaindasitiri, masevhisi uye kutengeserana kwakawanda kwaizoregererwa pamutero uyu.
Ndezvipi zvigadzirwa zvinosarudzika
Kunyangwe isu takakuudza kuti chiyero chakaenzana chinokanganisa izvo zvinhu zvinotengeswa zvakaringana pasina kuzvishandura, hazvireve kuti zvigadzirwa zvese zvinosanganiswamo. Muchokwadi, kune zvimwe zvigadzirwa zvinogona kuregererwa kubhadhara uyu "mutero". Hatisi kungotaura nezve izvo izvo zvinodarika makumi maviri muzana% yekubhadharira kunoitwa kune vanozvimiririra uye / kana makambaniAsi, kana akateedzana ezvigadzirwa akatengeswa, haafanire kupinda muhurumende yekuwedzera mari. Uye ndezvipi izvo zvigadzirwa? Zvakanaka: mota, zvipfeko zveganda (asi kwete mabhegi kana mabhegi), peturu zvigadzirwa, zvishongo, michina yeindasitiri, antiikisi, zvekutanga zvigadzirwa, zvicherwa, simbi, simbi, zvidimbu zvidimbu uye zvidimbu ...
Mashandiro anoita akaenzana sei
Saka kuti zvese zvinyatso kujekerwa kwauri. Fungidzira kutengesa kunoitika. Munhu "anosungirwa" kutakura ichi chiyero chakaenzana ndiye anopa, ane invoice inofanirwa kuratidza chibharo ichi. Zvisinei, Inoitwa neimwe nzira uye izvi zvakabatana neVAT pachayo, kubvira zvinoenderana neVAT inotsigirwa, iyo yekufananidza imwe yekuwedzera inoshanduka.
Semuenzaniso, kana iyo VAT yawakaisa iri 21%, saka mubhadharo uri 5,2%. Kana iyo VAT iri gumi muzana, iyo yakaenzana yekuwedzera iri 10%. Chekupedzisira, kana iyo VAT iri 1,4%, ipapo chibhadhariso chichava 4%.
Nenzira iyi, invoice yemutengesi iyoyo inofanirwa kuratidza hwese mutero uye VAT uye, zvichienderana neizvi, chiyero chakaenzana chinoenderana nacho.
Zvakanakira nekukanganisa kweiyo yakafanana surcharge
Zvisinei nezvaungave uchifunga nezve yakaenzana yekuwedzera, chokwadi ndechekuti pamusoro pekukanganisa kwaunogona kuona, zvakare kune zvakwakanakira.
Pakati pavo, chikuru uye chakakosha inyaya yekuti mutengesi, weiyi yekuwedzera, haana chisungo chekuzivisa VAT kana kuchengeta mabhuku eakaunzi.
Kune chikamu chayo, chakanyanya kushata pamusoro peichi chiwedzero ndechekuti VAT pakutenga haigone kubvisirwa, zvinoreva kuti unofanirwa kutora mari yakakwira, nekuti kune rumwe rutivi une VAT uye kune imwe chiyero chakaenzana.
Kuenzana mutero wekuwedzera (uye kuregererwa)
Kana iwe uri mumwe wevaya vanobatwa neyakaenzana surcharge, iwe unofanirwa kuziva kuti kune akateedzana ezvisungo. asi zvinotisunungurawo kubva kune vamwe. Kunyanya, ichave inosungirwa:
Vanopa zvitupa kuti isu takafukidzwa neiyi yekuwedzera uye izvo, nekudaro, ivo vanofanirwa kuzvipinza mumavovhoice. Ipapo ndipo panobhadharwa VAT kumutengesi, pamwe nechaji uye ivo vanotora kubhadhara kuHomwe.
Chengeta uye nyora invoice, sezvo vachimiririra mubhadharo muchimiro 130 che IRPF.
Bvisa invoice, asi chete kana mutengi akumbira icho. Kana zvisiri, risiti yekutenga inopfuura zvakakwana. Kunze kwekunge ivo vari vepakati-munharaunda yekutengesa, uko ipapo unosungirwa kuisa invoice, uyezve kana iye anenge achigamuchira ari munhu zviri pamutemo kana iyo Public Administration.
VAT yekudzoserwa chisungo kune avo vatengi vakatenga zvigadzirwa uye vakaenda kune imwe nyika kunze kwenzanga. Iyi VAT inogona kukumbirwa kuburikidza nefomu 308.
Pane kusunungurwa here?
Ehe hongu, pamusoro pezvisungo izvi, kune zvimwe zvinhu izvo zvinoenzana zvinowedzera mukati mavo izvo zvinotiregedza kubva kwavari. Izvi ndeizvi:
Usapa fomu yeVAT 303 (makota matatu) kana fomu 390 (pagore). Izvi zvinoreva kuti hatizofanirwe kubhadhara VAT.
Nekusabhadhara VAT, haufanire kuchengeta bhuku reVAT chero (kunze kwekunge paine zvimwe zviitiko kana kutengesa kwatinoshandisa iko).
Iko hakuna zvakare kusungirwa kwekutengesa invoice kune vanamuzvinabhizinesi, nyanzvi kana vanhu, chero bedzi ichida kushandisa kodzero yemutero, kuendesa kune imwe nhengo yenyika, kutengesa kunze kwenyika uye kana iye anogamuchira ari wePublic Administration kana munhu ari pamutemo anoita. usaite semushambadziri kana nyanzvi.
Pakupedzisira, tinoda kukusiira iyo mirau inotonga yakaenzana yekuwedzera. Izvi ndizvo:
Zvinyorwa 148 kusvika 163 zveMutemo 37/1992, waZvita 28, 54 kusvika 61 weRoyal Decree 1624/1992, yaZvita 29, 3.1.b) uye 16.4 yeRoyal Decree 1619/2012, yaNovember 30.
Mutemo 28/2014, waNovember 27 (BOE we28) uye Royal Chirevo 1073/2014, waZvita 19 (BOE we20), ese ari maviri kushanda sa01 / 01/2015.
Iwe une here mimwe mibvunzo nezve iyo yakaenzana surcharge?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » General hupfumi » Chii chinonzi chiyero chakaenzana